परीक्षाको समयमा खाइने खानाले पनि ल्याउन सकिने अङ्कमा फरक पर्छ , के खाने, के नखाने ? – Koshidaily
मुख्य पृष्ठसमाचारपरीक्षाको समयमा खाइने खानाले पनि ल्याउन सकिने अङ्कमा फरक पर्छ , के खाने, के नखाने ?
कुनै पनि विद्यार्थीलाई परीक्षाको समय धेरै तनावपूर्ण हुन्छ । परीक्षाको समयमा धेरै योजना र समय व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ ।
कुनै पनि विषयमा राम्रो अङ्क ल्याउन पढ्न मात्र नभई जीवनशैलीको बानीमा ध्यान दिन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । परीक्षाको समयमा वा परीक्षा वरिपरि खाइने खानाले पनि परीक्षामा ल्याउन सकिने अङ्कमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
धेरै व्यक्तिमा जङ्क फुडको सेवन गर्नाले परीक्षाको नजिक तनाव बढ्न सक्छ । जङ्क फुडहरू अस्वस्थ्यकर हुन्छन् र यिनीहरूले मस्तिष्कको कार्यमा बाधा पुर्याउने गर्छन् । त्यसैले परीक्षाको समयमा खानपानमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । हरियो तरकारी आँखा र दिमागका लागि राम्रो हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि प्रकारको परीक्षाको तयारी गर्दा आफ्नो आहारमा हरियो सागपात समावेश गर्नुपर्छ ।
हरियो सब्जीमा आइरनको मात्रा धेरै हुन्छ, जसले हेमोग्लोबिनको स्तर बढाउन र अन्ततः सतर्कता बढाउन मद्दत गर्छ । प्रोटिन तीन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण म्याक्रोन्युट्रिएन्टमध्ये एक हो जुन शरीरलाई धेरै आन्तरिक कार्य गर्न ठूलो मात्रामा चाहिन्छ । यसले कोष निर्माण गर्न तथा मेमोरी बढाउन पनि मद्दत गर्छ । प्रोटिनको सेवनले ध्यान बढाउँछ र ऊर्जास्तर सुधार गर्छ ।
प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो शरीरको तौलको एक किलो प्रति ०.८ ग्राम प्रोटिनको सेवन गर्नुपर्छ । परीक्षा वरिपरि वा परीक्षाभन्दा ठीक पहिले चिनीको एक उच्च मात्रा भएको सबै खाद्य पदार्थको सेवन गर्नु हुँदैन । केक, चकलेटजस्तै चिनीको मात्रा उच्च भएको खानाले तत्काल ऊर्जा दिए पनि केही समयपछि, यसले ऊर्जाको तहमा अचानक गिरावट निम्त्याउँछ ।
यसले थकान निम्त्याउनुका साथै पढेको कुरा बिर्सिनेसमेत हुनेगर्छ । सातदेखि आठ घण्टा निद्राले शरीरलाई स्वस्थ र ऊर्जाशक्ति प्रदान गर्नुका साथै निद्रा लामो समयको लागि पढेको कुरालाई याद गर्नका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पर्याप्त निद्राले छोटो अवधिको मेमोरीलाई दीर्घकालीन रूपमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्छ । यसले परीक्षाको अगाडि सिकेका याद गर्न मद्दत गर्छ ।
निद्रा नपुगेमा शरीर र मस्तिष्क सुस्त हुनुका साथै मुड पनि नराम्रो भएको महसुस गराउन सक्छ । सबैका लागि र विशेषगरी परीक्षा वरिपरि हँुदा पर्याप्त मात्रामा पानी सेवन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्यका आधारमा कम्तिमा दिनको दुई लिटर पानी पिउनुपर्छ । शरीरमा पानीको मात्रा ठिक्क कायम गर्नाले टाउको दुख्ने, पेट दुख्नेबाट बचाउनुका साथै यसले अस्वस्थ खानबाट पनि रोक्न सक्छ ।